नवराज कुँवर काठमाडौं, २० असार
२०४७ सालभन्दा अघिसम्म ‘प्रकाश शर्मा’ नामले चिनिएका व्यक्तिले पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), एमालेको नेतृत्व गरे । निर्दलीय पञ्चायतको जगजगीका समयमा भूमिगत पार्टी, त्यसमा पनि निरङ्कुश र निर्दलीय शासन व्यवस्थाको अन्त्यका लागि लडेको पार्टीको नेतृत्व चानचुने कुरा थिएन ।
यति मात्र कहाँ हो र ! तिनै प्रकाश शर्मा नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै बने । तर, तपाईंले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सूची हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रकाश शर्माको नाम भेट्टाउनुहुन्न ।
राजनीतिमा लागेको भन्दै कुनै बेला जागिरबाट निकालिएका ती व्यक्तिले पञ्चायतकालमै राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गरे । उनलाई कतिपयले भविष्यको राष्ट्रपतिका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् ।
राजनीति त उनको मूल कर्म भई नै हाल्यो, यससँगै उनी भूमिगतकालदेखि नै साहित्य लेखनमा पनि क्रियाशील छन् ।
प्रकाश शर्मा भन्ने नाम प्रधानमन्त्रीहरूको सूचीमा किन छैन ? साहित्यमा किन छैन ? यसबारे थाहा पाउन हालका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको विगत कोट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसाे भए के झलनाथ नै प्रकाश शर्मा हुन् ? हाेइन भने प्रधानमन्त्री नै भइसकेको व्यक्तिकाे नाम किन सूचीमा उल्लेख छैन ? किन मान्छेले यो नामको व्यक्तिलाई चिनेनन् ?
यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने प्रयास यस पटकको ‘फरक पाटो’ स्तम्भमा गरेका छौँ ।
प्रकाश शर्माबारे प्रस्ट्याउनुअघि झलनाथ खनाल कसरी साहित्यमा जमे ? उनले नेपाली साहित्यका लागि के कस्ता योगदान गरेका छन् ? आजको फरक पाटोमा चर्चा गराैँ ।
पहिला झलनाथ खनाल, उनको राजनीतिक यात्रा र उनले अंगीकार गरेको फरक पाटो अर्थात् साहित्यका बारेमा जानौँ, त्यसपछि तपाईं स्पष्ट हुनुहुनेछ, प्रकाश शर्माबारे जान्न झलनाथलाई किन पढ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला खनालको राजनीतिक जीवनबारे चर्चा गरौँ ।
इलामको तत्कालीन साँखेजुङको पण्डित गाउँमा ६ चैत २००६ मा बुबा पुङ्कनाथ र आमा मधुमाताका १३ सन्तानमध्ये सातौँ सन्तानका रूपमा जन्मिएका झलनाथ १४-१५ को उमेरमै राजनीतिक गतिविधिमा लागे । सानोमा उनलाई सबैले ‘जन्तरे’ भनेर बोलाउँथे ।
उनी सानैदेखि अलिक क्रान्तिकारी स्वभावका थिए । परिवर्तनका खातिर लेखिएका गीतले उनको ध्यान तान्थ्यो । यसको अर्थ उनी सानैदेखि प्रगतिशील धारका गीत-सङ्गीत, कविता सुन्न र लेख्न रुचाउँथे । सानैदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा उभिएका उनी २०२१ सालदेखि राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका थिए ।
युवा अवस्थामा कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरेकै कारण २०२३ सालमै उनले मेची विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । आजभन्दा ५२ वर्षअघि अर्थात् २०२५ सालमा झलनाथले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । राजनीतिका साथ उनले आफ्नो पढाइलाई पनि ध्यानमा राखे । विज्ञान विषयमा स्नातक गरेपछि खनालले २०२७ सालको अन्त्यतिर बागलुङको गलकोट माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकका रूपमा काम थाले ।
रमाइलो कुरा त के छ भने त्यस विद्यालयमा अहिलेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि पढाउँथे । झलनाथले केही समय उनै केसीका सहकर्मीका रूपमा काम गरे ।
विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा उनी कम्युनिस्ट गतिविधिमा पनि संलग्न थिए । बाग्लुङमा पढाउँदै गर्दा राजनीतिक संलग्नताको आरोपमा उनले जागिर गुमाएका थिए । पछि इलामको भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय मङ्गलबारे पुगेपछि राजनीतिक संलग्नताको आरोपमा खनाल पक्राउ भई जेल परेका थिए ।
उनले २०३० सालमा १४ महिना तथा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा ६ महिना जेल जीवन बिताए ।
झापा विद्रोहपछि उनी २०३१ सालमा गठित क्रान्तिकारीहरूको सङ्गठन को-अर्डिनेसन कमिटीका संस्थापक सदस्य भए ।
शिक्षण पेसा छाडेपछि खनालले राजनीतिशास्त्र र इतिहास लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरे ।
जेलमुक्त भएसँगै भूमिगत रूपमा सक्रिय भएका खनाल २०३३ सालमा झापाबाट फेरि पक्राउ परे । यस पटक उनले ६ वर्ष झापामा जेल बस्नुपर्‍यो ।
तर, तत्कालीन समयमा पञ्चायत कि बहुदल ? भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन घोषणा गरिएको जनमतसङ्ग्रह बहिष्कार गर्ने रणनीति पार्टीले लिएकाले खनाल फेरि भूमिगत भए ।
२०३४ सालमा नेकपा मालेका संस्थापक सदस्य भएका खनाल २०३९ सालदेखि २०४५ सालसम्म पार्टीका महासचिव भए । खनाललाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरू भन्छन्, ‘तत्कालीन नेकपा (माले)को शक्ति सङ्घर्षले उनलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो ।’
२०५३ सालको गठबन्धन सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका खनाल २०५४ को छैटौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि पनि झलनाथ केही समय भूमिगत भएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलन सफल पार्नमा पनि खनालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
२०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा माधवकुमार नेपाल पराजित भएपछि महासचिव पद छाडे । उनको ठाउँमा झलनाथ आए र पार्टी चलाउन थाले । २०६५ फागुनमा बुटवलमा भएको नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हाल उनी सचिवालय सदस्य एवं वरिष्ठ नेता हुन् । उनी इलाम क्षेत्र नं.- १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।
खनाल पार्टीभित्र वैचारिक तर्क गर्न अब्बल मानिन्छन् । उनी अध्ययनशील पनि छन् ।
राजनीतिक जीवनमा उनले पञ्चायतको प्रहार त भोगे नै, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा आफ्नै सहकर्मीबाट उनले थुप्रै प्रहार खेपेका छन् । प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन एमालेकै कतिपय नेताको चेपुवामा परेर उनले राजीनामा दिएका थिए । तथापि, उनी आफूलाई एक सफल राजनीतिक नेताका रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् ।
रविलक्ष्मी चित्रकारसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका झलनाथका एक छोरा छन् ।
सङ्गीत र साहित्य
झलनाथ खनाल एक सिर्जनशील व्यक्ति हुन् । उनको परिचय राजनीतिमा मात्र सीमित छैन, उनी एक सिद्धहस्त गीतकार, कवि पनि हुन् । साहित्य झलनाथको जीवनको अर्को अभिन्न पाटो हो । उनी गीत-सङ्गीत र कविताका पारखी हुन् । साङ्गीतिक र साहित्यक क्षेत्रमा उनी ‘जेएन खनाल’का रूपमा चर्चित छन् । निःसन्देह एउटा राजनीतिज्ञ बहुआयामिक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
अहिलेसम्म उनले २ वटा गीति एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । २०६५ सालमा गीति एल्बम ‘परिवर्तनका स्वरहरू’ ल्याएका जेएनले २०७५ सालमा आफ्नो दोस्रो एल्बम ‘परिवर्तनका स्वर भाग- २’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
पहिलो एल्बमको ‘मातृभूमि नेपाल हाम्रो’ गीतमा त खनालले अभिनय नै गरेका छन् । राजनीतिसँगै खनाल आफ्नो समय गीत-सङ्गीत र साहित्यमा खर्चिरहेका छन् । उनी प्रगतिशील गीत लेख्न रुचाउँछन् । अहिलेसम्म २ वटा मात्र एल्बम निकाले पनि झलनाथले सयभन्दा धेरै गीत लेखेका छन् ।
अत्यन्तै व्यस्त दैनिकीबाट समय निकालेर उनले साङ्गीतिक क्षेत्रलाई प्रगतिशील धारका सिर्जना सुम्पिएका छन् । उमेरले ७२ वर्ष लागिसकेका खनाल अहिले पनि राजनीति र साहित्यमा उति नै सक्रिय छन्, जति विगतमा थिए । पार्टीभित्र चुलिएको विवाद, कित्ताकाट, गुट-उपगुट, समस्या समाधानका नाममा हुने बैठक, विभिन्न कार्यक्रम, अन्तर्वार्ता आदिका कारण उनको दैनिकी निकै व्यस्त हुने गरेको छ । तर पनि उनी गीत लेखिरहेका हुन्छन्, साहित्यक पुस्तकहरू पढिरहेका हुन्छन् ।
उनी साहित्यलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न पाटो ठान्छन् । ‘साहित्यले जीवन, समाज, देश, परिस्थिति बोल्छ’, उनी भन्छन्, ‘अझ प्रगतिशील धारका सिर्जनाहरू मेरो रुचिका विषय हुन् ।’
‘राजनीतिमा आफ्नो सत्ता बनाउन वा टिकाउन लडाइँ हुन्छ । जबकि, साहित्यमा सत्ताका लागि कुनै सिधा सङ्घर्ष हुँदैन । साहित्यकारले वास्तविक जीवनबाट कलात्मक बिम्बको सिर्जना गर्छन्, उनीहरूले नागरिकका खुसी र दुःखहरू बोल्छन्’, खनालको बुझाइ छ, ‘राजनीतिज्ञ नागरिकका त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्ने वा समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने तहमा हुन्छन् । यस हिसाबले राजनीति र साहित्यलाई म अन्तर्सम्बन्धित मान्छु ।’
उनीसँग लामो समय काम गरेका कतिपय नेता भन्छन्, ‘झलनाथ खनाल कहिल्यै यस्तो स्थितिमा देखिएका छैनन्, जहाँ उनी चिटिक्क नदेखिऊन्, सफा र सुहाउँदो पहिरन नलगाएका हुन् ।’
झलनाथ आफ्नो पहिरनप्रति विशेष हेक्का राख्छन् । जहाँ जाँदा पनि उनी चिटिक्क परेर जान्छन् । कपाल सिलिक्क पारेर कोरेका हुन्छन् ।
उसो त एक समय झलनाथको पहिरनबारे निकै किस्सा सुनिन्थे- झलनाथ विदेशी ब्राण्डका र महँगा पहिरन मात्र रुचाउँछन्, टाई मात्र १४ हजार रुपैयाँको लगाउँछन् ।
अब प्रकाश शर्माका बारेमा कुरा स्पष्ट पारौँ ।
२००७ सालमा जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । यससँगै आमनेपालीमा सुसंस्कृत बहुदलीय अभ्यास, अधिकार र अमनचयनको आशा पलायो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पदच्यूत मात्र गरेनन्, संसदसमेत भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिदिए ।
२०१८ सालको क्रान्ति, २०३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दबाबले २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपालमा जनमतसङ्ग्रह गराए । बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्ये कुन चुन्ने ? भनी गराइएको जनमतसङ्ग्रहमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो ।
राजनीतिका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापाहरूको चतुर्‍याइँको खास उपयोग गरे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले । र, ‘सुधारिएको पञ्चायत’का नाममा पुनः निर्दलीय व्यवस्थाले निरन्तरता पायो ।
फेरि पञ्चायतकै हालीमुहाली सुरू भयो । त्यसपछि मुलुकमा नेपाली कांग्रेस र वाम शक्तिहरूले पञ्चातविरुद्धको सङ्घर्ष अझै बलियो पार्दै लगे । यस क्रममा पार्टी, नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । नेताहरूलाई भेट्नासाथ गिरफ्तार गरिन्थ्यो । त्यसैले नेताहरू भूमिगत थिए । दलहरूको सङ्घर्ष २०४६ सालमा आएर जनआन्दोलनमा परिणत भयो ।
उक्त जनआन्दोलन दबाउने प्रयासमा पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरे । ‘प्रथम जनआन्दोलन’का रूपमा चर्चित उक्त आन्दोलन ५० दिनसम्म चल्यो । २६ चैत २०४६ मा (५०औँ दिन) आन्दोलनसामु निरङ्कुश व्यवस्था झुक्यो र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भयो ।
२०३७ सालदेखि माले पार्टीका नेता झलनाथ खनाल भूमिगत रूपमा सक्रिय थिए । २६ चैत २०४६ को रात ११ बजे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदल घोषणा गरेपछि वामपन्थी मोर्चाका नेताहरू काठमाडौंको ब्रह्मटोलस्थित एक सेल्टरमा बसिरहेका थिए । मोर्चाका नेताहरूले अब क्रमिक रूपमा सार्वजनिक हुने र सबैभन्दा पहिला झलनाथ खनाल सार्वजनिक हुने तयारी गरेका थिए ।
आन्दोलन सफल भएको खुसीयालीमा काठमाडौंमा राती नै जनसागर उर्लिएको थियो । ब्रह्मटोलबाट खनालसहितका नेता जुलुसमा सहभागी भई टेकुतिर गए । जाने क्रममा उनीहरूले देखे, कालीमाटीबाट दशौँ हजारको मास टेकुतिर लम्किरहेको थियो । त्यतिबेलाका वडा अध्यक्ष जीवन मानन्धरले मोर्चाका हाइकमाण्ड सदस्यहरू खनालसहित मदन भण्डारी, माधव नेपाललाई चिनेपछि घेरा हालेर टुँडिखेलको विजयसभामा लिएर गए, जहाँ नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले विशाल विजयसभा आयोजना गरेका थिए ।
भीडको अगाडि मञ्चमा कांग्रेस नेताहरू बसेका थिए । यसअघिको योजनाअनुसार मदन भण्डारीले झलनाथलाई कानमा खुसुक्क भने, ‘ल कमरेड जेएन, तपाईं आजबाट खुला हुनुस्, विस्तारै पार्टीलाई पनि खोल्नुपर्छ ।’
त्यसपछि मास छिचोल्दै खनाल टुँडिखेलको मञ्चमा पुगे । मञ्चमा ‘प्रकाश शर्माजी आउनुभो’ भन्दै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी)ले स्वागत गरे । खनालले मञ्चमा पुगेर भने, ‘आजका मितिबाट म जेएन खनाल हुँ, मेरो वास्तविक नाम यही हो ।’
प्रकाश शर्मा तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई आज हामी राजनीतिमा झलनाथ खनाल भनेर चिन्छौँ भने साहित्यमा जेएन खनाल । झलनाथले तत्कालीन माले, एमालेदेखि प्रधानमन्त्री भएर देश पनि हाँके । खनाल सम्झन्छन्, ‘कांग्रेससहितका अन्य पार्टीहरूसँग वार्ता गर्दा म आफूलाई प्रकाश शर्माका रूपमा चिनाउथेँ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, २० असार २०७७, ०१:४७:००
सेवा नपाएरै जाँदै छ आमाहरुको ज्यान
विमानका ती पाइलट, देशका यी पाइलट